Ithegi: ukuphindaphinda | Martech Zone
Isebenza njani intengiso
NgoLwesithathu, Meyi 4, 2016 NgoLwesine, Meyi 5, 2016 Douglas Karr
Ngelixa ndiphanda ngesihloko sentengiso, ndenzekile kwi-infographic kwiNtengiso esenza ukuba sithenge. I-infographic engezantsi ivula ngombono wokuba iinkampani zityebile kwaye zinemfumba yemali kwaye bayayisebenzisa ukuphatha abaphulaphuli babo abahluphekileyo. Ndicinga ukuba yeyona nto iphazamisayo, ngelishwa, kunye nembono engenakwenzeka. Uluvo lokuqala lokuba kuphela ziinkampani ezityebileyo ezibhengezayo yingcamango engaqhelekanga. Inkampani yethu ayisityebi kwaye, enyanisweni, yayinesibini
Ndibe lilizwi malunga nokucekiswa kwam kwi-panacea yamva nje yokuba ukuthengiswa kwefuthe kuthengiswa njani kwi-Intanethi. Ngelixa ndikholelwa ukuba abachaphazeli banokufikelela okukhulu kwaye banefuthe, andikholelwa ukuba banamandla okuphembelela azimeleyo kwezinye izinto. Ukuthengisa okunefuthe kusadinga isicwangciso esingaphaya kokuphosa amanye amatikiti kwiimpembelelo okanye ukufumana i-retweet. NgokukaGqirha Robert B. Cialdini, umbhali wempembelelo: Inzululwazi nokuziqhelanisa (uHlelo lwesi-5), ndingathi
Iklabhu yeBuzz yeNtlalontle: Yabelana kwaye wabelane
NgoLwesine, Aprili 18, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Enye yezinto ezintle zokuya kwinkomfa efana neNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi kukuba ushiya intuthuzelo yenethiwekhi yakho kwaye ungene kwabanye abaninzi. Nokuba ubungakanani benethiwekhi yakho, uhlala unqunyelwe kwiindaba kunye nolwazi ekwabelwana ngalo ngaphakathi. Ukuya kwinkomfa yamazwe aphesheya ngolu hlobo kukuvulela iinethiwekhi ezininzi ezintsha. Sidibene netoni yabantu eSan Diego kwaye siza kuqhubeka
Enye yeefographics zamva nje esazithumelayo yayizindlela ezili-10 zokuguqula abatyeleli ngePsychology. Ukuqonda ukuba yintoni eqhuba umntu ukuba athenge kubalulekile kumthengisi. Ukuba unakho ukubonelela ngolwazi oluyimfuneko, unokuchaphazela isigqibo sokuthenga. Le vidiyo infographic ivela kubabhali bakaEwe !: Iindlela zeNzululwazi eziQinisekisiweyo zeSayensi zinika ukuqonda kwinto esishukumisela ukuba sithenge. Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kwividiyo ziphindaphinda,
Ubuntu kunye nokuthembela kwiBlogging
Lwesine, Okthobha 30, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndibukele iindaba namhlanje kwaye zininzi iintetho malunga nembono ethandabuzekayo yezopolitiko kunye nendlela umgqatswa ngamnye athe waziswa ngayo waphandwa. Imithombo yeendaba ezininzi zisadlala indima enkulu kunyulo, njengoko sibona izigidi zeedola ziphoswa kwintengiso kumabonakude. Lunyulo olungcolileyo kwaye ndiya konwaba kukubona ukuphela kungekudala. Amagqabantshintshi ngeli phulo ibililo